ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Dustin ဂျွန်ဆင်: သူ့ဇီဝ, နိုင်ပွဲများအငြင်းပွားစရာတွေနဲ့
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Dustin ဂျွန်ဆင်: အငြင်းပွားမှုမှသည်ဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ်မှ
Dustin ဂျွန်ဆင်နီးပါးသူအပေါ်ကိုတက်ပြသယခုအချိန်တွင်နေအောင်မြင်မှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် PGA Tour လိုလားသူဂေါက်သီးအရှည်ဆုံးယာဉ်မောင်းတစ်ဦးအဖြစ်။ တန်ခိုးတော်အစောပိုင်းသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သူကြီးတွေခွင့်အလမ်းများနှင့်တစ်ဦးရိုင်းကလေးတစ်ခုခုအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုမှုတ်များအတွက် knack ခဲ့ဂေါက်ကွင်းလွှမ်းမိုးပေမယ့်နိုင်ပါတယ်။ သူဆင်းအခြေချပြီးမိသားစုစတင်ခဲ့သည်ကိုအနိုင်ပေးပြီးတာနဲ့ - သူ၏ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံဖလားအပါအဝင် - သာတိုးမြှင့်, သူသည်ကိုလည်းအမှတ်သို့ရောက်ရှိ
ကမ္ဘာကြီးကိုအဆင့်အတွက် 1 ။
PGA Tour: 17 (ဂျွန်ဆင်ရဲ့တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ပေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြသည်)
ဂျွန်ဆင်ရဲ့အဓိကတအနိုင်ရရှိ (ယခုအချိန်အထိ) ကို 2016 အမေရိကန်ပွင့်လင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
တစ်နှစ်တာ၏ PGA Tour Player ကို, 2016
PGA Tour ပိုက်ဆံခေါင်းဆောင်, 2016
PGA Tour ပျှမ်းမျှခေါင်းဆောင်, 2016 သွင်းယူ
အဖွဲ့ဝင်အတွက်ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား , 2010, 2012, 2016
အဖွဲ့ဝင်အတွက်ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဖလား , 2011, 2015, 2017
အဖွဲ့ဝင်အတွက်ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ Walker ကဖလား , 2007
တစ်ဦး Pro ကိုဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားအဖြစ်ဂျွန်ဆင်ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်များနှင့် Start ကို
Johnson ကကိုလံဘီယာ, SC အတွက်, ဇွန်လ 22, 1984 မှာမွေးဖွားခြင်း, မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတဆင့်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား၌ နေ. ခဲ့သည်။ ဒါက Coastal ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်အဘို့အကောလိပ်ဂေါက်သီးကစားခြင်းပါဝင်သည်။ ဂျွန်ဆင် CCU မှာခုနစ်ခုအချိန် NCAA ဆုရှင်ကြီးနှင့်သူတစ်နှစ်တာ၏ Big တောင်ပိုင်းရဲ့ညီလာခံ Player ကိုသုံးအဆက်ဆက်ရာသီခဲ့သည် 2006 ခုနှစ်နှင့် 2007 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံး-အဖွဲ့အားလုံး-အမေရိကန်အမည်ရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးအပျော်တမ်းအနေဖြင့်လည်း, ဂျွန်ဆင်ရေးအဖွဲ့က USA ရဲ့အနိုင်ရ Palmer ကဖလားများနှင့် Walker ကဖလားကစားသမားပေါ်ခဲ့သည်။
မကြာမီတွင်ကြောင်း Walker ကဖလားအသွင်အပြင်ပြီးနောက်ဂျွန်ဆင်လိုလားသူလှည့်။ သူဟာ 2007 ခုနှစ်မှာမိမိလိုလားသူပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း Valero တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုဖွင့် ဖြတ်ပျောက်ဆုံး။
2007 ခုနှစ်၏နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်ကျော်, ဂျွန်ဆင်၏သုံးခုစလုံးအဆင့်ဆင့်သို့ ဝင်. PGA Tour Q-ကျောင်း , သူသည်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် 14 ပြီးသွားတက်အနာ - 2008 များအတွက် PGA Tour အပေါ်သူ၏လူသစ် status ကိုဝင်ငွေဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသော။
Johnson ကချက်ချင်းသည်သူ၏ဂိမ်း၏အမာခံများဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကြီးမားသောအာဏာကိုပြသသည်။ (2008 ကတည်းကဂျွန်ဆင်ခရီးစဉ်ရဲ့မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးစာရင်းဇယားများတွင်ထိပ်တန်း5အပြင်ဘက်ကိုလက်စသတ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ) သူကပိုက်ဆံစာရင်းကအပေါ်တစ်ဦးလူသစ်နှင့်ချော 42 ကြိမ်မြောက်အဖြစ်သုံးထိပ်တန်း 10 ဦးချောတင်ခဲ့သည်။ သူသည်ထိုအဗိုလ်လုပွဲနှစ်ခုတွင်းချင်းစီအပေါ် birdies အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲ, အဖွင့်ကျောက်ခေတ် Resort ကိုချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဂျွန်ဆင်ကို 2009 ခုနှစ်တွင်အခြားအနိုင်ရဆက်ပြောသည်, ထို့နောက်မိမိအ stardom ညာဘက်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အမြဲအလျင်အမြန်ပေမယ့်မရကြီးပြင်းတဲ့ကာလဝင်ကြ၏။
ယခုနှစ် 2010 ဂျွန်ဆင်များအတွက် breakout ရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ PGA Tour အပေါ်နှစ်ကြိမ်အနိုင်ရနှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအဖွဲ့သည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နှောင်းပိုင်းတွင်ပြိုကျသို့မဟုတ်တင်းတင်းပြောတတ်တဲ့သူ့ကိုကုန်ကျမီနှင့်သူနှစ်ဦးကိုဗိုလ်ကြီးမှာအမှုအရာများ၏ထူခဲ့ပါတယ်။
မှာ 2010 အမေရိကန်ပွင့်လင်း , ဂျွန်ဆင်သုံးကျည်ပြီးနောက်သုံးလေဖြတ်ခဲကျင်းပခဲ့တယ်။ သို့သော်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ရှိသူတစ်ဦးက 82 မှ ballooned နှင့်ပဉ္စမနေရာအရပ်မှကျဆင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် 2010 မှာ PGA Championship ပြိုင်ပွဲ , ဂျွန်ဆင်မှာပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးရန်အားထင်ရှား ပီပီရေလက်ကြား ခဲနှင့်တစ်ဦး PLAYOFF အတွက်ချည်ထားလေ၏။ သို့သော်နောက်ဆုံးအပေါက်ပေါ်တွင်ဂျွန်ဆင်သူတစ်ဦးဘန်ကာထဲမှာကြီးနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်အန္တရာယ်ရှိသူ၏ကလပ် grounding များအတွက် 2-လေဖြတ်ပင်နယ်တီရရှိခဲ့အသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဒါက PLAYOFF ထဲကနှင့်ပဉ္စမနေရာအရပ်မှဆင်းသူ့ကိုခေါက်။
Johnson ကအမှတ်တမဲ့ခေါင်းစဉ်က "အဓိကမရှိဘဲအကောင်းဆုံး" ဆိုမှုအလောင်းတော်ထားစဉ်ဒါပေမယ့်သူကတခြားပြိုင်ပွဲအနိုင်ရဆက်ပြောသည်။ ဒါကမျိုးစုံ WGC ဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။ သူကမှာ, သို့သော်, အဓိက၌အခြားသောအခွင့်အလမ်းမှုတ် 2015 အမေရိကန်ပွင့်လင်း ဂျွန်ဆင်ကသူ့ကိုခေါင်းစဉ်ပေးပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးအပေါက်ပေါ်သုံးခြေလျင်ရွှေလင်းတကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်လွဲချော်ရှိရာ။
ဂျွန်ဆင်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံဝင်ငွေလုပ်ခဲ့တယ်တောင်မှသောအခါ - ကမှာဖြစ်ပျက် 2016 အမေရိကန်ပွင့်လင်း ခြင်းနှင့် PGA Tour အပေါ်သူ၏ 10th ခြုံငုံအနိုင်ရရှိခဲ့ - ကအငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။
သူကကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်အဖြစ်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်စဉ်အတွင်း, သူ့ပဉ္စမအပေါက်ပေါ်တွင်ဂျွန်ဆင်ရဲ့ဘောလုံးအစိမ်းရောင်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကွာနင်းနှင့် on-site ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတရားဝင်ရုံးသုံးနှင့်အတူစကားပြောပြီးနောက်ဂျွန်ဆင်မရှိပြစ်ဒဏ်ကြီးနှင့်ဆက်လက်ကြားပြောလေ၏။ အနည်းငယ်တွင်းအကြာတွင် USGA အရာရှိများဂျွန်ဆင်ချဉ်းကပ်နှင့်အဖြစ်အပျက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်သူ့ကိုပြောပြသည်သို့သော်သူဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးပြစ်ဒဏ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု - မဟုတ်တဦးတည်းကိုသူတို့ပတ်လည်၌အပြီးသည်အထိအပေါ်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဂျွန်ဆင်သည်သူ၏ရမှတ် (ပင်နယ်တီလေဖြတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမ?) ဖြစ်ခဲ့သည်အတိအကျဘာကို သိ. မမိုဃ်းတိမ်အောက်မှာနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်၏ကျန်ရှိသောကစားခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်ဆင် 69 ရိုက်ကူးသုံးယောက်လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရအသုံးပြုပုံသို့သော်ပြစ်ဒဏ် moot ပြန်ဆို။
Going အရှိန်အဟုန် Keeping: ဂျွန်ဆင်နံပါတ် 1 ရောက်ရှိ
အမေရိကန်ပွင့်လင်းအနိုင်ရရှိ, 2016 ခုနှစ်တွင်ဂျွန်ဆင်အားဖြင့်သူလည်းဝင်ငွေရရှိမှုအတွက်ခရီးစဉ်ကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ပျမ်းမျှအားသွင်းယူနှင့်အနိုင်ရသောတစ်နှစ်သုံး PGA Tour အောင်ပွဲ၏ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြောင်း တစ်နှစ်တာဆုကို၏ Player ကို ။
2017 ခုနှစ်တွင်ဂျွန်ဆင် WGC ဖြစ်ရပ်များခဲ့ကြသည်နှစ်ခုသောအလေးပြိုင်ပွဲ, အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 2017 ၏သူ၏ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိသည့်ခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာဦးကပွင့်လင်း နှင့်အောင်မြင်ခြင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, တရားဝင်ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးရာထူးအတွက်နံပါတ် 1 အစက်အပြောက်သို့ဂျွန်ဆင်တွန်း။
Johnson ကချန်ပီယံလိဂ်၏ကင်းပြိုင်ပွဲ, သူ့ 17 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း PGA Tour အနိုင်ရခြင်းဖြင့် 2018 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်။ Johnson ကပူးပေါင်း က Tiger Woods နှင့် ဖီးလ် Mickelson အသက်အရွယ် 34 မတိုင်မီ 17 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအနိုင်ပေးရောက်ရန်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခု၏တစ်ခုတည်းသောဂေါက်သီးအဖြစ်။
ဂျွန်ဆင်ရဲ့သက်တမ်းကြာဖက်မော်ဒယ်နှင့်တချိန်ကကျော်ကြားခဲ့သော celebutante Paulina Gretzky ဖြစ်ပါတယ်။ Paulina, ဟော်ကီဒဏ္ဍာရီဝိန်း Gretzky ၏သမီး, သူမဂျွန်ဆင်ချိန်းတွေ့စတင်မီကပင်ဂေါက်သီးပရိသတ်တွေမသိမဟုတ်ခဲ့, တစ်ခုလုံးကို Gretzky မိသားစုဂေါက်သီး-အရူးဖြစ်၏။
ဂျွန်ဆင်နှင့် Gretzky လက်ထပ်မဟုတ်, သူတို့ကနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 2013 ခုနှစ်, စေ့စပ်တယ် 2013 ခုနှစ်ကတည်းကအတူတူခဲ့ကြပြီ။ Tatum (ဇန်နဝါရီလ 19, 2015 မွေးဖွား) နှင့်မြစ် (ဇွန်လ 12, 2017 ဖွား): အဆိုပါစုံတွဲသည်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဂျွန်ဆင်ရဲ့အစ်ကို Austin ကသူ့ caddy ဖြစ်ပါတယ်။
2014 ရာသီ၏အလယ်၌, ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် PGA Tour ထံမှမရှိခြင်းတစ်ဦးမကျန်ကြေငြာခဲ့သည် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုများ။ " Johnson ကအပြုသဘောမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများအတွက် PGA Tour တို့ကဆိုင်းငံ့ခဲ့သောကြောင့်, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများဂေါက်သီးစာပမြေားအတိုငျး, ချိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါ PGA Tour မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းကြောင့်ဆိုင်းငံ့ခံရကြေညာသို့မဟုတ်အတည်ပြုဘယ်တော့မှ၏မူဝါဒခဲ့, နှင့်ခရီးစဉ်ဂျွန်ဆင်ရဲ့ခွင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ခဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂေါက်မဂ္ဂဇင်း, သို့သော်, ဂျွန်ဆင်ကိုလည်း 2009 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအပြုသဘောမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများနှင့် 2012 ခုနှစ်တွင်အခြားတဦးတည်းများအတွက်ခရီးစဉ်အားဖြင့်ဆိုင်းငံ့ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
2009 Pebble Beach တွင် Pro ကို-Am, 2011 Barclays နှင့်ချန်ပီယံလိဂ်၏ 2013 ပြိုင်ပွဲ: ဂျွန်ဆင်ရဲ့ပထမခုနစ်အနိုင်ပေးသုံးခုရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့် 54 တွင်းမှတာရှည်ပြိုင်ပွဲ၌နေကြ၏။
အဆိုပါ 2017 ရာသီ၏အဆုံးမှတဆင့်ဂျွန်ဆင်၌ငါးကိုအနိုင်ပေးခဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးရိုက်ချန်ပီယံ (WGC) ဖြစ်ရပ်များ ။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားမည်သူမဆိုက Tiger Woods (ဝုဒ်ထိုကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲများတွင်အသက် 18 ကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူဦးဆောင်) အမညျမထက်ပိုပါတယ်။
2018 တဆင့်ဂျွန်ဆင်ကသူ့လူသစ်တဦးတည်း, တတန်းအတွက် 11 ရာသီကတည်းကတိုင်းရာသီအတွက်အနည်းဆုံး PGA Tour အောင်ပွဲရှိပါတယ်။ ဂျက် Nicklaus (17) နှင့်က Tiger Woods (14) သာကြာကြာသူတို့ရဲ့လူသစ်အနှစ်နှင့်အတူစတင်ထိုကဲ့သို့သောအလင်းတန်းများဖြာရှိခဲ့ပါတယ်။
Dustin ဂျွန်ဆင်ရဲ့ Pro ကိုနိုင်ပွဲများများစာရင်း
ဤတွင်သက်ကရာဇျစဉျစာရင်း, ဂျွန်ဆင်အားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့အပေါငျးတို့သ PGA Tour ပြိုင်ပွဲနေသောခေါင်းစဉ်:
ကျောက်ခေတ် Resort ကိုချန်ပီယံရှစ်ဖွင့် 2008
2009 တွင် AT & T က Pebble Beach တွင်အမျိုးသား Pro ကို-Am
2010 တွင် AT & T က Pebble Beach တွင်အမျိုးသား Pro ကို-Am
2010 BMW ကားချန်ပီယံရှစ်
2012 FedEx စိန့်ယုဒ Classic
ချန်ပီယံလိဂ်၏ 2013 Hyundai ပြိုင်ပွဲ
2013 WGC HSBC ကချန်ပီယံလိဂ်
2015 WGC Cadillac ချန်ပီယံရှစ်
2016 WGC Bridgestone ဖိတ်ကြားချက်ကို
2016 BMW ကားချန်ပီယံရှစ်
2017 WGC မက္ကဆီကိုချန်ပီယံရှစ်
2017 WGC Dell က Technologies ကပွဲစဉ် Play စ
ဘယ်က Tiger Woods စပွန်ဆာပေးသူများအရှုပ်တော်ပုံ၏ရလဒ်အဖြစ်သူ့ကိုစိုက်ထားသော?
ယောဟနျသ Daly: အဂေါက်သီးဗိုလ်မှူးချန်ပီယံတစ်ဇီဝ
အဘယ်သူသည်က Tiger Woods '' Caddies တစ်ခုမှာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီလော
က Tiger Woods မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Que es ICE က y Que puedes hacer en caso က de una redada
ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
ဂေါက်ကွင်း၌ 'Par' '၏မူလအစ
တဲ့ Romulus - ထိုတွေ့ရှိခဲ့အကြောင်းရောမဒဏ်ဍာရီနှင့်ရောမပထမဘုရငျ
Adverb Clauses (အပိုင်း 3) နှင့်အတူဝါကျများအဆောက်အဦးများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး
5 ကဒ်လုံး Poker Play လုပ်နည်း
အဏ္ဏဝါဗေဒမှ Related တီထွင်မှု
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: မဟာမိတ်စာချုပ် (1778)
ကက်သလစ်ဆုတောင်းချက်, 'လာကြ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်' 'ရန်စကားလေ့လာပါ
တစ်ဦး Pirouette သလား
Titanoboa vs. Carbonemys - သူကားအဘယ်သူဆွတ်ခူး?
သင်ကကောလိပ်ထဲသို့ Get လုပ်နည်းအများကြီးသိပ္ပံလိုအပ်သလား?
ဒေါ်ရှယ်လီဂျက်ဆင်အားဖြင့် '' အဆိုပါထီ '' ၏ analysis
Raoult ရဲ့ဥပဒေဥပမာပြဿနာ - ငွေ့ဖိအားနဲ့အားကောင်းတဲ့လျှပ်လိုက်ပစ္စည်း
တစ်ဦးအနီး-မရဏအတွေ့အကြုံ၏ 10 အများစုမှာဘုံ Element တွေကို